‘पित्तलमा सुनको जलप...’ मा देखिएकी सानु अब ‘गुन्यु चोली लौंदा पनि...’ भन्दै - Kanchanjangha Online
‘पित्तलमा सुनको जलप…’ मा देखिएकी सानु अब ‘गुन्यु चोली लौंदा पनि…’ भन्दै
काठमाडौं । हालैै राजु लामाको शब्द ‘गुन्यु चोली लौंदा पनि नो प्रोब्लेम….’ बोलको गीत गायर चर्चा बटुलिरहेकी गायिका सानु खतिवडा आधा दशकदेखि नेपाली गीत, संगीत क्षेत्रमा संघर्षरत छिन् । उनी सानै उमेरदेखि संगीत क्षेत्रमा सकृय रहदै स्कुले जिवनमा पनि थुप्रै साँस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा आफ्नो गलाको कला देखाई सकेकी छन् ।
वरिष्ठ संगित साधक प्रकाश गुरुङसंग संगीतको प्रशिक्षण लिएकी गायिका सानुले ‘पित्तलमा सुनको जलप छ ….’ बोलको गीत गायर यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । लोक, पप, आधुनिकमात्र होईन सबै प्रकारको गीत गाउन आफु तयार रहेको बताउने गायिका सानु चलचित्रको पाश्र्व गायनमा जम्ने सम्भावना बोकेकी आशा लाग्दी गायिका हुन् । पूर्वाञ्चलको सुन्दर नगरी ईलाम चौक बजारकी स्थानीय वासिन्दा सानु खतिवडा गीत, संगीतको क्षेत्रमा नै संगर्षरत रहने बताउछिन् भने नृत्यमा प्राङ्गत छिन् भने उनलाई चलचित्र ‘क्यारेङग्याङ २’ र केही म्युजिक भिडियोमा उनलाई देख्न सकिन्छ ।
« रोजमा प्रताप दासको पनि अभिनय ! (Previous News)
(Next News) रोज र रामकहानीमा कुन चलचित्र हुनेछ सुपरहिट ? (भिडियो रिपोर्ट) »